कस्ता व्यक्तिमा गर्न मिल्छ कपाल प्रत्यारोपण? कति लाग्छ खर्च? कपाल झर्ने तथा नपलाउने समस्या किन हुन्छ? के कपालसँग सम्बन्धित समस्याहरु हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएको हुन्छ? कपाल झर्ने समस्या रोकथामका लागि के गर्ने? कस्तो अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ? बुधबार, फागुन ५, २०७७
उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ : डा गौचन कोभिड–१९ मात्रै नभएर अन्य संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचार गर्ने लक्ष्य हाम्रो अस्पतालले लिएको छ। त्यही अनुसार हाम्रो अघि बढ्ने योजना छ। उपचार नपाएर कसैले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिन हामी सबैले सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। आइतबार, माघ १८, २०७७
प्लास्टिक सर्जरी गर्न विदेश धाइरहनु पर्दैन सर्जरी गर्नुअघि डाक्टरलाई भेटेर परामर्श लिनुपर्छ। गुगलमा हेरेर, कसैको कुरा सुनेर वा आर्टिकल हेरेर सर्जरी गर्नु हुँदैन। कस्मेटिक वा रिकन्स्टक्टिभ सर्जरी गर्दा डाक्टरलाई भेट्नैपर्छ। सोमबार, पुस २०, २०७७
सरकार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनका लागि संवेदनशील छैन तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने जोखिम पहिलेभन्दा अहिले धेरै छ। तर मानिसको डर चाहिँ अहिले घट्दै गएको छ। मानसिक तनाव र डर हिजोको दिनमा जति थियो, त्यो अहिले घटेर गएको छ। आइतबार, पुस १९, २०७७
कोरोनाको दोस्रो लहर आएपनि हामी तयारी अवस्थामा छौँ : डा शैल रुपाखेती कोभिडका बिरामीको सहजताका लागि नयाँ व्यवस्था पनि गरेका थियौँ। हामीले ‘हाउसपिटल’ भन्ने सेवा सुरु गर्‍यौँ। ‘हाउसपिटल’ अर्थात् घरमै बसेर पनि अस्पतालको सेवा लिन सकिने। मंगलबार, पुस ७, २०७७
नेपालमा कोभिड भ्याक्सिनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ सोमबार, मंसिर २९, २०७७
एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले गम्भीर समस्या निम्त्याउँदै छ : डा विकास देवकोटा मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
दसैंमा गाउँ गएका मानिस फर्केपछि राजधानीमा संक्रमण थप फैलने डर हुन्छ बुधबार, कात्तिक ५, २०७७
कर्मचारीको साथले संक्रमितको उपचार र अन्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ : डा विष्णुप्रसाद शर्मा (अन्तर्वार्ता) शुक्रबार, साउन ३०, २०७७
उपचारका विषयलाई लिएर डाक्टरलाई फौजदारी अभियोग लगाउन हुँदैन : डा लोचन कार्की सोमबार, साउन १२, २०७७
परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने समुदायस्तरमा संक्रमितको संख्या बढ्छ : डा न्यौपाने, जोन्स हप्किन्स् विश्वविद्यालय [अन्तर्वार्ता] बुधबार, असार २४, २०७७
९३ संक्रमित निको बनाएको नारायणी अस्पतालका मेसु डा उपाध्याय भन्छन्- पूर्वतयारी बिना सम्भव थिएन बुधबार, जेठ १४, २०७७
मापदण्ड अनुसारका क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ : नारायणप्रसाद घर्ती आइतबार, जेठ ११, २०७७
औषधि उद्योग आर्थिक संकटमा छन् : जीनारायण बहादुर क्षेत्री [अन्तर्वार्ता] आइतबार, वैशाख २८, २०७७
कोरोना संकटमा मिर्गौला रोगको जोखिम : डा अनिल बराल [भिडियो वार्ता] बुधबार, वैशाख २४, २०७७
ठूला नेताको काखमा बसेर मेरो चरित्रहत्या गर्न खोजिएको छ : मन्त्री भानुभक्त ढकाल [अन्तर्वार्ता] शुक्रबार, चैत २८, २०७६
संघीय सरकारको यही रवैया रह्यो भने कोरोना नियन्त्रण गाह्रो छ : मेयर भट्ट [अन्तर्वार्ता] शुक्रबार, चैत २८, २०७६
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने? [भिडियो वार्ता] शनिबार, चैत १, २०७६
प्रधानमन्त्रीलाई आँखा खोल्नुहाेस् भन्दा खोल्नुभयो, दुखेको छ भन्दा छैन भन्नुभयो : डा दिव्यासिंह शाह [अन्तर्वार्ता] बिहीबार, फागुन २२, २०७६
अस्पतालको सेवा सुधारका लागि काम गर्छु : डा कृष्णप्रसाद पौडेल [अन्तर्वार्ता] शुक्रबार, फागुन १६, २०७६
प्युठान जिल्ला अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना अस्पताल बनाउन सकिन्छ : डा अमृत पन्थी सोमबार, फागुन ५, २०७६
स्थान अभावमा सेवा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौं : डा विष्णुप्रसाद शर्मा [अन्तर्वार्ता] बिहीबार, फागुन १, २०७६
भिडियो : कोरोना भाइरस के हो? जोगिने कसरी? - डा शेरबहादुर पुन बिहीबार, माघ ९, २०७६
आसन मात्र योग होइन : डा वासुदेव उपाध्याय [भिडियो वार्ता] बुधबार, माघ १, २०७६
बहुविशेषज्ञ सेवा दिने उत्कृष्ट अस्पताल बनाउँछौं : किशोरकुमार महर्जन [अन्तर्वार्ता] आइतबार, पुस १३, २०७६
स्वास्थ्यमा सकारात्मक क्रान्ति ल्याएका कारण नर्भिकले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउन सफल भयो : मनिष खेम्का मंगलबार, मंसिर २४, २०७६
भिडियो : नर्सिङ संघको अध्यक्षका दुई प्रत्यासीलाई प्रश्न – उम्मेदवारी किन? के–के छन् एजेन्डा? आइतबार, मंसिर २२, २०७६
मेरुदण्ड उपचारका क्षेत्रमा आएका नविनतम ज्ञानका लागि सम्मेलनको आयोजना : डा रविन्द्र लाल प्रधान शनिबार, मंसिर ७, २०७६